6 Talaabo oo Lagu Heli Karo Macluumaadka Macaamiisha (CDP) La Iibso C-Suite-kaaga | Martech Zone
Talaado, Nofeembar 10, 2020 Arbacada, Nofeembar 11, 2020 Tom Treanor
Way fududaan lahayd in loo maleeyo in xilligan aan la hubin ee aan la hubin, CxOs aysan diyaar u ahayn inay sameeyaan maalgashi waaweyn oo ku saabsan suuqgeynta xogta iyo howlaha shirkadaha. Laakiin si la yaab leh, weli way xiiseynayaan, waxaana laga yaabaa inay tahay maxaa yeelay waxay horay u filanayeen hoos u dhac dhaqaale, laakiin rajada laga qabo abaalmarinta fahamka ujeeddada iyo dabeecadda macaamiisha ayaa aad muhiim u ahayd in la iska indhatiro. Qaarkood xitaa waxay xawaareynayaan qorshayaashooda ku aaddan isbeddelka dhijitaalka ah, iyadoo xogta macaamiisha ay tahay qeyb muhiim u ah khariidadooda.
Maxay Shirkaduhu Wali U Maalgashanayaan Isbadalka Dijital ah?
CFOs, tusaale ahaan, waxay horeyba rajo uga qabeen dhaqaalaha 2020 si wanaagsan kahor Covid-19. Markii ugu dambaysay Sahanka CFO Global Business Outlook, sanadka 2019, in ka badan 50 boqolkiiba CFOs waxay rumeysnaayeen in Mareykanku la kulmi doono hoos u dhac dhaqaale kahor dhamaadka sanadka 2020. Laakiin inkasta oo rajo xumadu jirto, haddana CDP-yadu waxay muujiyeen koror rikoodh ah sanadka 2019. Waxaa laga yaabaa in qaar badan oo ka mid ah maamulka sare ay sii wadaan maalgashiga xogta macaamiisha maxaa yeelay Marnaba ma noqonin mid deg deg ah in la fahmo waxa ay macaamiishoodu rabaan, yeelaan, oo ay iibsadaan marka xigta iyadoo ay xaaladuhu isbadelayaan toddobaadba usbuuc inta lagu guda jiro faafida sii socota.
In kasta oo daruuraha dhaqaale ee durba ku soo aruuray jihada dhammaadka 2019, Maamulayaasha guud aysan diiradda saarin dhimista kharashyada. Taa baddalkeeda, waxay xiiseynayeen inay ku socdaan taxaddar iyo hagaajinta faa'iidada. A Sahanka 2019 Gartner waxay ogaadeen in Agaasimayaasha guud ay aad u daneynayeen inay iska caabiyaan isbeddelada suuqyada iyagoo tilmaamaya fursadaha cusub ee kobaca iyo maaraynta qiimaha wanaagsan.
Qaadashada? Waqtiyada maanta ee aan la hubin ayaa dhab ahaantii ka dhigaya isbeddelka dijitaalka ah himilo deg deg ah. Taasi waa sababta oo ah CDP waxay isticmaali kartaa falanqaynta xogta iyo xogta ka faa'iideysiga mashiinka si loo hagaajiyo faa'iidada guud ee urur.
Tallaabada 1: Soo Koob Kiiskaaga Adeegsiga CDP
Waa muhiim in la fahmo kiiska xogta macaamiisha iyo CDP-yada. Haddii aad tahay C-suiter – ama haddii aad si dhow ula shaqeyso mid – waxaad si gaar ah u awood u leedahay inaad door ka ciyaarto qeexidda qiimaha adeegsiga gaarka ah ee xogta macaamiisha: shakhsiyeynta safarka tafaariiqda macaamiisha, hagaajinta bartilmaameedka iyo kala soocista, saadaasha degdegga ah iyo saameyn ku yeelashada dhaqanka macaamiisha iyo iibsashada, ama xitaa qaabeynta degdegga ah ee alaabooyinka cusub, ama adeegyada, adeegyada, iyo noocyada cusub. Sida laga soo xigtay Kooxda Farland, Maamulayaasha C-Suite waxay asal ahaan ka duwan yihiin dhagaystayaasha kale. Waxay qiimeeyaan helitaanka udub dhexaadka arrinta si deg deg ah, iyagoo ku mashquulsan natiijooyinka mashruuca, iyo ka wada hadalka istiraatiijiyadda, ee ma ahan xeelado. U diyaari garoonkaaga guusha si aad ugu qurxiso kooban kooban oo fulineed.
Diirada saar dhibaatooyinka gaarka ah: Waxaad rabtaa inaad awood u yeelatid inaad sameysid bayaan sidan oo kale ah: “Saddexdii rubuc ee lasoo dhaafay, iibku wuu gaabis yahay. Waxaan dooneynaa inaan ka beddelno isbeddelkan adoo kordhinaya celceliska iibinta macaamiil kasta iyo iibsashada soo noqnoqoshada. Waxaan ku gaari karnaa hadafkan talooyinka dukaamaysiga ee xogta ku saleysan iyo kuuboonada shaqsiga ah. ”
Baadh sababta: “Xilligan, ma hayno qalab aan xogta ugu beddeleyno shaqsiyeed. In kasta oo aan ururinno macluumaad badan oo macaamiisha ah, waxay ku keydsan yihiin silo kala duwan (iib-iib ah, barnaamij daacad u ah macaamiisha, degel internet, dukaanka maxalliga ah ee xogta Wi-Fi). ”
Saadaali waxa xiga: "Haddii aan ku guuldareysanno inaan fahamno sida dabeecadda macaamiisha ay isu beddeleyso, waxaan waayi doonaa iibka iyo saamiga suuqa ee tartamayaasha qancin kara dalab cusub, kanaallo kala duwan, oo ka wanaagsan intii aan awoodno."
U qor xal: “Waa inaan hirgelino Nidaamka Xogta Macmiilka si loo mideeyo xogta macaamiisha. Adoo adeegsanaya CDP, waxaan mashruuc ka dhigeynaa iibka celcelis ahaan macaamilkiiba inuu kordhin doono boqolkiiba 155 halka soo iibsiga uu kordhayo boqolkiiba 40. ”
Qof walba kiiskiisa ganacsi waa mid gaar ah. Waxa muhiimka ah ayaa ah in la aqoonsado caqabadaha la xiriira maaraynta xogta macaamiisha, sida ay u saameynayaan awooddaada si aad u hesho fikradaha macaamiisha, iyo sababta ay fikradahaasi muhiim u yihiin. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad ogaato sababta ay arrimahan u jiraan iyo sababta hababkii hore ay ugu fashilmeen xallintooda. Tan ugu muhiimsan, abuur dareen deg-deg ah oo leh jaangooyooyin maaliyadeed oo caddeeya sida arrimahani u saameynayaan natiijooyinka ganacsiga.
Tallaabada 2: Ka jawaab su'aasha: "Waa maxay sababta CDP?"
Shaqadaada xigta waa inaad dib uga fikirto waqti ka hor intaadan qaban shaqada guriga. Waxaad u badan tahay inaad su'aalo badan qabay, sida: "Waa maxay CDP?" iyo “Sidee ayuu CDP uga duwan yahay CRM iyo DMP ah? ” Hadda waxaa la joogaa waqtigii aad u isticmaali lahayd aqoontaada adoo diyaarinaya dhowr qeexitaanno aasaasi ah, oo heer sare ah.
Intaa kadib, sharax sida ay tahay ganacsiga CDP wuxuu sida ugu fiican u xallin doonaa kiiskaaga adeegsiga, wuxuu gaari doonaa ujeeddooyin muhiim ah, iyo ka caawi kooxdaada suuq-geynta inay helaan natiijooyin wanaagsan. Tusaale ahaan, haddii ujeedooyinka waaxdaadu ay tahay inay hagaajiso waxtarka xayeysiinta iyadoo loo marayo waqtigeeda farriinta macaamiisha shakhsi ahaaneed, muuji sida CDP waxay mideyn kartaa xogta macaamiisha si ay u abuurto moodello macaamiil dhinacyo badan leh ayna soo saari karto liisas gaar ah oo bartilmaameed ah. Ama, haddii ujeedooyinkaagu yihiin hagaajinta daacadnimada macaamiisha, ka hadal sida CDP ay isugu dari karto xogta gujiska ee barnaamijka moobiilka oo ay ugu biiri karto websaydhka jira, iibka, iyo xogta kale ee macaamiisha si loo abuuro khibrad macmiil oo ka wanaagsan.
Talaabada 3: Hel Aragtida Saamaynta Sawirka Weyn ee Aad Doonayso
Hogaamiyeyaasha heerka-C way ogyihiin inay muhiim tahay in aragti weyn laga yeesho sawirka weyn marka isbedel weyn lagu sameynayo istiraatiijiyadooda ama howlahooda. in hoggaamiyeyaasha heerka-C ay gadaal ka soo abaabuli karaan. Marka, yoolkaaga soo socdaa wuxuu noqon doonaa inaad tusto sida CDP uu sidoo kale uga caawin doono ururkaaga inuu gaaro himilooyin badan oo istiraatiijiyadeed ah oo horay loo ansixiyay, isagoo soo bandhigaya aragti ah sida CDP uu gacan uga geysto abuuritaanka hawlgal ku habboon xog-wadista hawlgalka.
Si aad u sameyso fikirkaaga, waa waxtar leh in la xuso sida CDP ay u wanaajin karto iskaashiga ay la leeyihiin madaxda kale ee heerka C-ga. Faa'iidada CDP ee badanaa la iska indhatiro ayaa ah inay yareyneyso baahida loo qabo taageerada IT iyada oo la abuurayo waxtarka u dhexeeya suuqgeynta iyo kooxaha IT-ga. Waa kuwan dhowr dariiqo CMOs iyo CIOs labaduba waxay ku guuleystaan ​​CDP:
Xog uruurinta / maaraynta oo la hagaajiyay. CDP-yada waxay la wareegaan shaqada adag ee aruurinta, raadinta, iyo maamulida xogta macaamiisha ee waaxaha suuq-geynta iyo IT-ga.
Mideynta otomaatiga ah ee aragtida macaamiisha. CDP-yada waxay ka qaadaan qaadista culus saarista aqoonsiga macaamiisha, taas oo yareyneysa shaqada xogta iyo dayactirka labadaba.
Kordhinta ismaamulka suuq geynta. CDP-yadu waxay bixiyaan qalab buuxa oo ah is-adeegsi loogu talagalay suuqleyda, iyaga oo tirtiraya baahida loo qabo IT si loo abuuro warbixinno waqti-qaadanaya.
Madal suuqgeynta B2B Kapost waa tusaale-adduun dhab ah oo muujinaya sida is-waafajintaani u shaqeyso. Si loo habeeyo loona automation howlaheeda, Kapost wuxuu ku tiirsanaa qalab kala duwan oo SaaS ah, sida Mixpanel, Salesforce, iyo Marketo. Si kastaba ha noqotee, soo saarista iyo kobcinta xogta ku jirta qalabkan waxay ahayd caqabad joogto ah. Dhisidda halbeeg waxqabadka cusub wuxuu u baahday ciidan yar oo injineerada software-ka ah. Intaa waxaa sii dheer, keydka keydka guriga ee loo dhisay wadar ahaan xogta lama socon karo qiyaasta loo baahan yahay waxayna u baahan tahay kormeer joogto ah kooxda IT-da.
Si dib loogu fikiro nidaamyadan, Kapost wuxuu adeegsaday CDP si uu udub dhexaad ugu noqdo xogtiisa dhammaan keydadka badan iyo qalabka SaaS. 30 maalmood gudahood, Kapost waxay awood u yeelatay inay kooxaheeda si fudud ugu hesho dhammaan xogteeda markii ugu horeysay. Maanta, DevOps ayaa iska leh geeddi-socodka lagu liqayo xogta badeecada xasaasiga ah, halka howlaha ganacsi ay xakameynayaan caqliga ganacsiga wadista KPIs. CDP-da ayaa kooxda howlaha ganacsiga Kapost ka xoreysay ku tiirsanaanta injineernimada waxayna siisay kaabayaal falanqeyn xoog leh.
Tilaabada 4: Ku Taageer fariintaada Xaqiiqooyin iyo Jaantusyo
Iibinta fikradda dhibcood waa weyn. Iskusoo wada duuboo, si kastaba ha noqotee, waxaad rabtaa jawaabo su'aasha ah "haddaba maxay tahay"Hawl wadeen kasta oo heer C ah wuxuu rabaa inuu ogaado:" Waa maxay saameynta ay ku leedahay qadkayaga hoose? " Lucille Mayer, oo ah sarkaalka sare ee warfaafinta ee BNY Mellon ee magaalada New York, ayuu u sheegay Forbes:
Furaha helitaanka ixtiraamka [leh C-suite] waa in si awood leh looga hadlo maadadaada. Xog adag iyo halbeegyo halkii xaqiiqooyinka tayada ku kasbado kalsoonida. ”
Lucille Mayer, Madaxa Sarkaalka Macluumaadka ee BNY Mellon ee magaalada New York
Dakhliga, kharashaadka, iyo kobaca ayaa loo rogaa faa iidada guud - ama maya. Marka ka hadal faa iidooyinka faa iidada ah, isbarbar dhig xaalada dhaqaale ee maanta iyo gobolka mustaqbalka la saadaalinayo. Halkani waa halka aad ka heli karto faahfaahinta ku saabsan xogta maaliyadeed ee muhiimka ah sida ROI iyo wadarta qiimaha lahaanshaha. Qodobbada hadalka qaarkood:
Qiimaha billaha ah ee CDP waxaa la saadaaliyay inuu noqon doono $ X. Tan waxaa ka mid ah shaqaaleynta iyo kharashyada nidaamku waa $ X.
ROI ee waaxda suuqgeyntu waxay noqonaysaa $ X. Waxaan ku helnay lambarkan annaga oo saadaalinayna [30% inuu kordhay dakhliga dukaanka, 15% kordhinta ololaha, iwm.]
Waxaa sidoo kale jiri doona $ X oo waxtar leh iyo keydinta [waaxda IT-ga, iibka, howlaha, iwm.].
Qaar ka mid ah noocyada kale ee isticmaalaya CDP-yada ayaa xaqiiqsaday natiijooyin cajaa'ib leh. Waa kuwan tusaalooyin yar:
Soo saaraha baabuurta Subaru wuxuu isku daray xogta macaamiisha ee ku baahsan meheradaha ganacsiga si loo hagaajiyo suuq geynta ROI. Natiijooyinka:
350% kororka xayeysiinta CTR
15% koror kuyimid dalabka hal olole oo ah "lacag celin" oo ah $ 26M iibka saafiga ah
Shirkadda qurxinta Shisedo waxay xoojisay xogta macaamiisha si looga faa'iideysto fursadaha kacsan ee barnaamijkooda daacadnimada. Natiijooyinka:
20% kororka dakhliga gudaha dukaanka xubin kasta oo daacad u ah hal sano kadib
11% kororka dakhliga
Tilaabada 5: Soo jeedi Xalkaaga
Hadda waxaa la joogaa xilligii la bixin lahaa falanqeyn ujeedo leh oo xalka u suurtagelin doonta aragtidaada habboon. Ku bilaw liistada shuruudaha go'aankaaga iyo iibiyaha CDP ee keena qiimaha ugu badan. Halkan, furaha ayaa ah inaad diirada saarto istiraatiijiyadda. Maqaal ku saabsan la xiriirinta C-suite, Roanne Neuwirth waxay qortay: “Hawl fuliyayaashu waxay daneeyaan sida ay u xallin karaan dhibaatooyinka ganacsiga una kobcin karaan dakhliga iyo macaashka. Iyagu ma xiiseeyaan… tiknoolajiyada iyo wax soo saarka - kuwani waa uun siyaabo lagu gaaro oo si fudud ayaa loogu wakiishay kuwa kale inay dib u eegaan waxna iibsadaan. ” Marka haddii aad rabto inaad ka wada hadasho astaamaha CDP, hubi inaad ku xirto iyaga natiijooyinka la saadaaliyay. Ka mid ah shuruudaha ugu sarreeya ee CDP ee loogu talagalay CMOs:
Qeybinta macaamiisha. Abuur qaybo jilicsan oo ku saleysan habdhaqanka macaamiisha, iyo sidoo kale xogta macaamiisha ee keydsan.
Isku-darka xogta qad la'aanta iyo khadka tooska ah. Ku dhaji dhibcaha macaamiisha kala duwanaanta hal muuqaal oo lagu aqoonsaday aqoonsiga macaamiisha gaarka ah.
Warbixin horumarsan iyo falanqeyn. Hubso in qof kastaa awoodo inuu isla markiiba helo cusbooneysiinta iyo macluumaadka istiraatiijiga ah ee ay ugu baahan yihiin inay ku qabtaan shaqooyinkooda.
Talaabada 6: Sharax Talaabooyinka Xiga, Qeex KPI-yada, iyo Diyaarso Jawaabaha Si Loola Socdo Su'aalaha
Dhamaadka garoonkaaga, waxaad siisaa xoogaa filashooyin cad ah goorta ay fuliyayaashu filayaan inay arkaan qiimaha ka imanaya hawlgelinta CDP. Sidoo kale waa waxtar leh in la bixiyo qorshe-soo-saar heer sare ah oo leh jadwal ay ku jiraan dhacdooyin waaweyn. Ku soo lifaaq jaan-gooyo halbeeg kasta oo muujin doona guusha hawlgalinta. Faahfaahinta kale ee lagu daro:
Nidaamyada ansixinta miisaaniyadda / waqtiyada
Intaas wixii intaa dhaafsan, u diyaargarow inaad ka jawaabto su'aalaha dhammaadka bandhiggaaga, sida:
Sidee ayuu CDP ugu habboon yahay xalalkeenna imkaaniyadeed ee hadda jira? Fikrad ahaan, CDP waxay u adeegi doontaa xarun si caqli-gal ah u abaabusha macluumaadka dhammaan xogtayada.
CDP ma ku adag tahay in lagu dhex daro xalalka kale? CDP-yada badankood waxaa lagu dhex dari karaa qasabno yar.
Sideed ku hubin kartaa inay CDP-yada halkan u joogaan inay joogaan? Qaar badan khubaradu waxay tixgeliyaan CDPs mustaqbalka suuqgeynta.
Isku Soo Wada Duuboo - Abuur Maanta Si Aad Isugu Diyaariso Berri
Waa maxay habka ugu wanaagsan ee lagu soo koobi karo muhiimadda ay leedahay CDP hay'addaada? Furaha ayaa ah in diirada la saaro fikradda ah in CDP uusan kaliya kaydin xogta macmiilka, waxay bixisaa qiime iyadoo la mideynayo xogta laga helo silo kala duwan si loo abuuro astaamo macmiil shaqsiyeed oo ku saleysan habdhaqanka waqtiga-dhabta ah. Kadib, waxay u adeegsaneysaa barashada mashiinka fikrado muhiim ah oo loo isticmaali karo in lagu fahmo waxa macaamiisha ay qiimeeyeen shalay, waxa ay maanta doonayaan, iyo waxa ay filayaan inay noqon doonaan berri. Intaas waxaa dheer, CDP wuxuu baabiin karaa kharashaadka laxiriira xogta, hantida de-silo, wuxuuna gaari karaa yoolal istiraatiijiyad ballaaran. Ugu dambeyntiina, CDP wuxuu ka caawin doonaa ururkaaga inuu u adeegsado xogtiisa si wax ku ool ah, isagoo gacan ka geysanaya wax soo saarka soo hagaagaya, howlaha la hagaajiyay, iyo kobaca kala duwan – kuwaa oo dhammaantood muhiim u ah macaash doonka iyadoo aan loo eegin halka uu dhaqaaluhu u socdo.
Tags: CDPMadal Macluumaadka Macaamiishasida loocaddaynmaxaa cdp
Tom Treanor waa Sarkaalka Suuqgeynta ee Xogta Qasnadda, halkaas oo uu ku wado wacyigelin ku saabsan xallinta shirkadda shirkadda CDP (macaamiisha xogta macaamiisha). Tom wuxuu MBA ka qaatay Wharton School of Business, iyo sidoo kale Master of Arts ee Daraasaadka Caalamiga kana qaatay Jaamacadda Pennsylvania.